Misy vaovao mbola miandry fa voatana ny tsiambaratelon'ny famotorana sao ireo malaso indray no maharaka mialoha ny vaovao ka mety hilefa na hamaly bontana. Voalazan'ny lehiben'ny kaompanian'ny zandary ao Ambatondrazaka fa noho ny fifandaminana dia nankinina tamin'ny polisy ny raharaha. Ny kaomisera lehiben'ireto farany no nanambara fa tsy mbola nisy voasambotra aloha hatreto ireo olon-dratsy.
Tsiahivina moa fa ny alarobia 8 janoary teo, tao Antsahamarova, Ambatondrazaka, Faritra Alaotra Mangoro no niseho ny fanafihana mitam-piadiana. Maherin'ny 10 ireo jiolahy nanolana ilay renim-pianakaviana voatafika sady mbola nangalatra moto sy ny entana maro tao an-tokantrano. Noho ny hery tsy nitovy dia tsy sahy nanohitra ilay fianakaviana lasibatra ary tsy sahy niantso vonjy raha tsy efa nilefa ela ireo tsy matahotody noho ny tahotra ny aina sy ny valifaty iverenan'ireo jiolahy izay mitam-piadiana. Voalaza moa fa novetavetain'ireo tsy valahara teo imason'ny zanany ilay renim-pianakaviana tsy manantsiny. Mirohotra ny tsy fandriampahalemana, tsy an-tsaha tsy an-tanana ka miandrandra ny paikadin'ny fitondrana izay mijoro hatrany ny olompirenena mba isorohana ny tranga mamohehitra toy izao, indrindra ny fanolanana mampivarahontsana mianjady ireo vehivavy.